Hetsika miavaka nandritra ny martsa manerantany (2) - Ny volana martsa manerantany
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Hetsika miavaka tamin'ny martsa manerantany (2)
Hetsika miavaka tamin'ny martsa manerantany (2)
04 / 09 / 2019 04 / 09 / 2019 ny Antonio Gancedo
Fanentanana vaovao momba ny "Limbolin'ny zanak'olombelona tsy fandeferana sy fandriampahalemana any an-tsekoly"
Tao anatin'ireo fandraisana andraikitra nasongadiny tamin'ny tontolon'ny 2 World martsa, ankehitriny isika dia manolotra ny hetsika nasain'i World without Wars and Violence Association manerana an'i Espana.
Izy io dia ahitana ny fanasana ireo sekoly rehetra any Espana hanatanteraka ireo simban'ny olombelona ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandanjana
Noho izany, ny taratasy iray dia nalefa ho an'ireo tompon'andraikitra amin'ny tolo-kevitra izay hanasana azy ireo hanatanteraka ao amin'ny ivon-toerana misy azy ary miaraka amin'ny fandraisana anjara mavitrika ireo mpianatra:
"Sarin'ny zanak'olombelona amin'ny tsy fandeferana sy fandriampahalemana any an-tsekoly"
Nanazava ny taratasy nalefany:
"Ity fampientanana ity dia namboarina ao anatin'ny tontolon'ny "MarchN World World ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fandeferana" izay hanomboka amin'ny Oktobra Oktobra 2 ary hifarana amin'ny volana martsa amin'ny 8 »
"Manomboka amin'ny volana septambra ho avy 21 (Andro iraisam-pirenena La Paz) ka hatramin'ny
ny Oktobra 11, Manolotra anao izahay hanao ireo tandindona roa ireo eo amin'ny ivon-toeram-pampianaranao, hampiroborobo ny fandraisana anjaran'ny mpianatra.
Azonao atao ny mandefa sary aminay (araka izay azo atao fitifirana avy any ambony) ny tsirairay amin'ireo marika ary raha ilaina dia horonantsary fohy a mundosinguerras@pazynoviolencia.org Miaraka amin'ireo fampahalalana manaraka ireto:
Anarany feno momba ny afovoany
Olona mifandray, telefaona sy mailaka (tsy hiseho amin'ny tranokala, na amin'ny toerana hafa)
Ireo sary eo anelanelan'ny 1 sy 2 megabites ary mampifandray amin'ilay video (raha ilaina).
En https://theworldmarch.org/simbolos-humanos/ Azonao jerena ny sary sasany tamin'ny fampielezan-kevitra farany sy ny horonantsary sasany tamin'ny herintaona tany Costa Rica, Ekoatera ary Honduras.
Azonao jerena avokoa ny sary sy ny horonan-tsarimihetsika taloha www.pazynoviolencia.org.
Izahay mametaka antontan-taratasy raha toa ka hitanao fa mahasoa: " Ny endrika an'ohin'ny olombelona dia ny fandriampahalemana sy ny tsy fandeferana "
Raha haingana araka izay azo atao, handefa vaovao aminao izahay mikasika ny fomba fampandrosoana ny fanentanana.
Mankasitraka mialoha sahady ny sainao ary manantena izahay fa hahaliana anao ity tolo-kevitra ity.
Izay fanontaniana rehetra momba ny tolo-kevitra dia aza misalasala manamboatra azy amin'ny mailaka sonia.
Jesosy Arguedas Rizzo
Simbolo an'olombelona ekipa
Tontolo iainana tsy misy ady ary herisetra
Ity hetsika ity dia nipoitra avy amin'ny ekipa bitika kely tsy misy ady ary tsy misy herisetra fa amin'ny faran'ny 2016 dia mety ny manome soso-kevitra amin'ny sekoly 4 na 5 ary ny sekoly fanatanjahantena Rayo Vallecano fa ao amin'ny trano iarahan'izy ireo dia natao ny marika olombelona miaraka amin'ireo mpianatra.
Tao anatin'ny roa taona ho avy, dia niitatra hatrany ny isan'ireo ivotoeram-pampianarana horesahina ary hatramin'izao dia misy mihoatra ny sekoly 150 any amin'ireo vondrom-piarahamonina tia tanindrazana Espana miaraka amin'ny fandraisana anjara maherin'ny mpianatra 40.000.
Ny fanatanterahana ireo endrika samy hafa an'ohatra ireo dia efa apetraka any amin'ny firenena samihafa amin'ny kontinanta maro.
Na ahoana na ahoana, ny traikefan'ireo mpanolotsaina sy ny mpandray anjara rehetra dia mampiseho fa ny fiarahamonina dia mihamalalaka hatrany ny ilana mampiroborobo ny kolontsaina milamina ary tsy misy famoretana tsy misy herisetra amin'ny sehatra rehetra.
Famonoan-tena ho an'ny fandriampahalemana any Kolombia
Fanehoan-kevitra 1 momba ny «fandraisana andraikitra miavaka amin'ny martsa maneran-tany (2)”